AKHRISO:- MD Farmaajo oo laba sano kadib markale tacsi udiray shacabka Somaliyeed. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdllaahi Farmaajo ayaa ka hadlay laba sano kadib qarixii khasaaraha badan dhaliyey oo Maanta oo kale sanadkii 2017 ka dhacay Isgoyska Soobe ee Muqdisho.
14-ka Oktoobar waa maalin xasuus murugo u leh dadkeenna Soomaaliyeed. Waa maalin aan waynay boqollaal muwaadiniin ah oo uu taagnaa dib u dhiska iyo horumarka dalkeenna.
Waa maalin ay argagixisadu si arxan darro ah u xasuuqeen boqolaal muwaadiniin ah oo ku hawlanaa nolol maalmoodkooda, ayna agoomeeyeen kumannaan carruur ah.
Qof kasta oo Soomaaliyeed waa uu xasuusan yahay dareenkii muragada lahaa ee ka dhashay weerarkan bahalnimada ah ee argagixisadu ay ku bartilmaameedsadeen shacabkeenna. Si la mid ah taas waxaa muhiim ah in aan xasuusanno midnimadii, gurmadkii iyo sida dhammaan dadkeenna Soomaaliyeed ay ugu wada istaageen wax u qabashada shacabkeennii ay dhibaateeyeen cadawgu.
Tan iyo wakhtigaas Dowladdu waxa ay xoojisay hawlgallada qorsheysan ee lagaga hor-tegayo falalka waxashnimada ah ee ay soo qorsheeyaan argagixisada Alshabaab, waxa ayna geesiyaasheenna Ciidamada Qalabka sida burburiyeen saldhigyo cadawgu ay ka soo maleegi jireen weerarrada arxan darrada ah, sidoo kalena waxay ciidanku ka xoreeyeen deegganno ay cadawgu ku dhibaateeynayeen muwaadiniinteenna ku nool.
Ugu dambeyntii, waxaan Alle u weydniinaynaa naxariistiisa shuhadadii innooga geeriyootay weerarkan, anigoo faraya Xukuumadda in laga warqabo dhammaan muwaadiniintii lixaadkooda ku waayey falkan banii’aadamnimada ka baxsan.
Previous articlePuntland oo Bilowday Dagaalkii Ugu danbeeyey Somaliland Gobolka sanaag Kadib Markii Beelahii Gobolka Ku Biireen
Next articleAKHRISO:- Mid kamid ah sheekooyinka xanuunka leh ee kusaabsan qaraxii Zoobe “”Waxaan hayaa 32 ilmood oo uu ka tagay walaalkay”
Atoore October 14, 2019 At 4:54 pm
War Tacsi iyo boohin beena looma baahna ee yaa laayey 1,000 qof ka badan oo soomaali ahaa oo ahaa garab rarato?Meel ku sheega kuwii ka dambeeyey gumaadkaas loo geeystay shacab masaakiin ahaa oo ku mashquulsanaa qutilyoonkooda.Nimanka mucaaradka ku aha Ina farmaajo ee Habar Gidir kama hadlaan dadkaas u badnaa beelahooda ee la xasuuqay.Warba kama hayaan oo waxay u kala tar-tamayaan madaxnimo iyo dhaqaalo hel.
Fanax October 14, 2019 At 9:43 pm
Atoore sxb waa ka war hayaan oo ayagaa ka dambeeya waxaas Xamar ka dhacaaya. Haddee ma ogidee siyaasiga Hawiye kuwa ugu sokeeya bay jaraan jaro uga dhigtaan inay villa xalane ku gaaraan. Atoore maatida Hawiye waxaa ku daneysan og siyaasiyiinta ka dhashay oo waa ayaga kuwa dhalliintooda u soo dira inay naftooda u haligaan qaddiyada Hawiye oo baambooyinka ku soo xira. Kuwaas meel kasta ka wah wah leynayaa toos uga dambeeya.